MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA BAGLE HOUND DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Bagle Hound Dog
Basset Hound / Ey ey isku dhafan oo isku dhafan
'Kani waa Bagle-kayga yar, Zo-Wee, Beagle iyo Basset Hound isku jira. Zo-Wee wuxuu ka shakhsiyad badan yahay dadka qaar oo aan ogahay. Sawirkani wuxuu muujinayaa iyada oo jirta 6 sano. Midabkeedu ugama muuqan wejigeeda sidii ay u ahayd markii ay yarayd. Waxay culeyskeeda tahay 28 rodol oo waxay leedahay qarxa tamar aan xad lahayn oo ay raacdo saacado hurdo ah. Waxay ka hadashaa wax walba mararka qaar waxay xirtaa qoorta loo yaqaan 'citronella collar' maxaa yeelay xamaasadeeda ayaa xoogaa kor u kac karta Nolosheeda oo dhan waxay lahayd caafimaad aad u fiican, laakiin sida Basset Hounds, waxay u baahan tahay nadiifin dhego badan. Iyadu waa eeygii ugu macaanaa ee aan abid aqaan!
Hole Bagle ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Basset Hound iyo Gorgor . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Bailey dheddigga Bagle Hound oo qiyaastii 3 bilood jir ah iyada toy toy . Iyadu waa isku dhafka Beagle iyo Basset hound -'Waxay dhaheen waxay heli doontaa qiyaastii 30 ilaa 45 rodol. Iyadu waa eey aad u firfircoon oo jacayl badan oo sankiisu u hoggaansamo halka ay u socoto :) '
Leo the Bagle Hound (Basset Hound / Beagle mix) da'da 6 sano
Indiana liinta midabkeedu yahay Bagle Hound (Basset Hound / Beagle mix) 5 sano jir
Bagle Hound Sawirada Page 1
Bagle Hound Sawirada Page 2
pictures of chihuahuas madow iyo caddaan
miniature Pinchercher dachshund chihuahua mix
gorgor iyo adhijirro reer Jarmal ah oo isku qasan eeyo
Jack parson Russell Pit isku darka